Knowledge - Pyit Time Htaung
ကုသရန် ခက်ခဲသူများ အတွက် အဖုအကျိတ် ပျောက်စေရန် လက်တွေ့ကြုံမှ ဆေးမြီးတို ကို ယုံမိသည် ။ အဖုအကျိတ်ဖြစ် ၍ သိပ္ပံဆေးဝါးဖြင့် ကုသရန် ခက်ခဲနေသူများအား ထိလည်းထိရောက် ငွေကုန်ကြေးကျနည်းပါး လှသည့် မြန်မာ တိုင်းရင်းဆေးမြီး […]
တာမွေ အဝိုင်း ခုံးကျော်တံတားဆောက်ဖို့ မြေတူးတော့ မြေအောက်ထဲ မှာ အချင်း ၅ ပေလောက် ရှိတဲ့ ဧရာမသံပိုက်ကြီးတွေတွေ့တယ်တဲ့ ။ ဘာပိုက်ကြီးတွေမှန်း မသိကြဘူး။ ဂျိူးဖြူရေပိုက်လည်း မဟုတ်ဘူးတဲ့ ။ ပိုက်ရဲ့ပုံစံ ၊ အရည်အသွေးနဲ့ […]
” လိပ်ခုံး ကားလေး ရဲ့ အစ………. ” ၁၉၃၄ ခုနှစ် နာဇီပါတီ ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီး ဟစ်တလာ ကအင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦးဖြစ် တဲ့ ဖာဒီနန် ပေါရှေး နဲ့ ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ပြီး […]
အိန္ဒိယ နဲ့ တရုတ်ပြည် ကြားက အာရှ ရဲ့ ပြည်သူလူထု အပျော်ရွှင်ဆုံးနိုင်ငံ ( သို့ ) အရှေ့တောင်အာရှ ရဲ့ စစ်တပ်မရှိတဲ့ တစ်ခုတည်းသော နိုင်ငံ
ဘူတန်နိုင်ငံဟာ ဘုရင် အုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံ တနိုင်ငံဖြစ်ပြီး တရားဝင် နာမည် ကတော့ ဘူတန် ဘုရင့်နိုင်ငံ ( Kingdom of Bhutan ) လို့ ခေါ်ပါပဲ ။ အာရှနိုင်ငံဖြစ် တဲ့ […]
ကျောက်ကပ်ပျက်စီး လို့ လဲလှယ်ရမယ့် အဆင့်ဖြစ်နေရင်တောင် လဲစရာမလိုပဲ ပြန်ကောင်းလာစေတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိ အစွမ်းထက် သဘာဝဆေးနည်း
ကျောက်ကပ်ပျက်စီးနေသူများ အတွက် သတင်းကောင်း လေးပါးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ.. ကျောက်ကပ်ပျက်စီး လို့ လဲလှယ်ရမယ့် အဆင့်ဖြစ်နေ ရင်တောင် လဲစရာ မလိုပဲ ပြန်ကောင်းလာစေတဲ့ ရေဝါးမြက် သို့မဟုတ် ဂမုန်းလေး သို့မဟုတ်စွေကျူချောင် အပင်ရဲ့ပုံဖြစ် ပါတယ် …. […]
ဗုဒ္ဓဘာသာ အမည်ခံ ရှေးရိုးစွဲတွေ ဉာဏ်နည်းမှုတွေ နှင့် လူငယ်တွေ ဘာသာမဲ့ ဖြစ်လာရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
By Pyit TimePosted on January 24, 2021
ဒေါက်တာသူရိန်လှိုင်ဝင်း ဘယ်ဘာသာဝင်လဲလို့ မေးတဲ့ အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဗုဒ္ဓဘာသာပါလို့ ဖြေ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် က ရှေးရိုးစွဲတော့ မဟုတ်ဘူး လို့ နောက်ဆက်တွဲ ထပ်ဖြေရတယ် ။ ဒီလိုဖြေရတာ ဗုဒ္ဓကို […]
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း မသိသေးသော ” ဘုရားရှင်အား တစ်ကြိမ် ဦးချရခြင်း အကျိုး “
တစ်ခါတော့…ဘုရားရှင်ဟာ နံနက်မိုးသောက်ထတဲ့ အချိန်မှာ မဟာကရုဏာသမာပတ်ဝင်စားရင်း စဏ္ဍာလတင်းကုပ်မှာနေ တဲ့ သက်တမ်းကုန်နေတဲ့ အဘွားအို တစ်ယောက်ကို သွားမြင်တော်မူပါတယ် သူ့နာမည် က စဏ္ဍာလီတဲ့ ။ စဏ္ဍာလီ အမည်ရှိတဲ့ အဘွားအိုဟာ အခု မနက်ခင်းမှာ ပဲ […]
နာမည်ကို သိရုံနှင့် မိမိမိတ်ဆွေ ရဲ့ စိတ်ဓါတ် ကို သိနိုင်တဲ့ တွက်နည်း
သင့် ရဲ့ နာမည် ကို ကြည့်ပြီး သင့် ရဲ့ စိတ်နေ သဘာဝ ကို အကြမ်းဖျင်း တွက် လို့ ရတဲ့ နည်း ရှိ တယ် ။ သ င့်ရဲ့ […]
စီးပွားဖြစ် ” စပါးခွံဖြင့် ကောက်ရိုးမှို စိုက်ပျိုးခြင်း “
စပါးခွံ ဖြင့် ” ကောက်ရိုးမှို ” စိုက်ပျိုးခြင်း စိုက်ဘောင်ပြင်ဆင်ခြင်း – အနံ (၃)ပေ အလျား(၁၂)ပေ – မြေပြင်ညီအောင်ညှိပြီး တမာဆီဖြန်း ထုံးဖြူး မြေအောင်းပိုးသတ်ခြင်း။ – စပါးခြံ တစ်တင်းခွဲအိတ် (၅)အိတ်နှင့် […]
ငါးသည် ရဲ့ ပါးစပ် အညွှန်းကို မစဉ်းစား မဆင်ခြင်ပဲ ငါးသည်းခြေ အစိမ်းလိုက်မျိုချ ရာမှ တန်ဘိုးကြီးလှတဲ့ ကျောက်ကပ်ပျက်စီး ရတဲ့ သင်္ခန်းစာယူစရာ ဖြစ်ရပ်
ကြက်မောက်တောင် ဆည်နား ၊ ရွာလေးတရွာက၊ လူနာ ၂ ယောက် ၊ သုခပြည့်စုံဆေးရုံကို ၊ ရှေ့ဆင့် နောက်ဆင့် ရောက်လာ ပါတယ် ။ ရောဂါလက္ခဏာတွေက၊ ခပ်ဆင်ဆင်ပါ။ ခေါင်းမူးတယ်၊ ပျိူ့တယ်၊ ရင်ခေါင်းအောင့်၊ […]